Qeybta:Ogaysiiska16 min akhris
Guddiga Agaasimayaasha Sanduuqa 'McKnight Endowment Fund for Neuroscience' wuxuu ku faraxsan yahay inuu ku dhawaaqo inay doorteen toddobo aqoonyahanno si ay u helaan abaalmarinta 2021 McKnight Scholar Award.
Abaal-marinta McKnight Scholar waxaa la siiyaa aqoonyahanno da 'yar oo saynisyahanno ah oo ku jira heerarka hore ee aasaasidda sheybaarro madaxbanaan iyo shaqooyin cilmi baaris ah oo muujiyey u heellan xagga neerfaha. "Fasalka sannadkan ee aqoonyahannada wuxuu soo bandhigayaa kala duwanaanta dhalinyarada, quruxda badan, hal abuurka neerfaha ee ka kala yimid daafaha dalka," ayuu yiri Kelsey C. Martin MD, madaxa guddiga abaalmarinta iyo horjoogaha David Geffen School of Medicine ee UCLA. Tan iyo markii abaalmarinta la soo saaray 1977, abaalmarintan sharafta leh ee shaqadda hore waxay maalgelisay in ka badan 250 baarayaal hal-abuur leh waxayna dhiirrigelisay boqolaal daahfurnaan horumarineed.
Wadajir ahaan, Aqoonyahannada McKnight waxay wax ka qabanayaan qaar ka mid ah su'aalaha ugu xiisaha badan ee neerfaha maanta, ayuu yidhi Martin. Iyagoo adeegsanaya habab tijaabooyin iyo xisaabeed isugu jira, waxay sharaxayaan sida khibradaha dareenka u qaabeeya maskaxda inta lagu jiro horumarka, sida wareegyada maskaxdu u soo baxaan dabeecadaha u gaarka ah galmada, sida codka loo arko loogana shaqeeyo inta lagu jiro dabeecadda, sida hurdadu u saameyn ugu yeelato garashada iyo caafimaadka maskaxda, sida farsamooyinka bayoolojiga unugyadu u xakameeyaan laxanka meertada, iyo sida wareegyada neerfaha u farsameeyaan macluumaadka una bartaan. Aniga oo ku hadlaya magaca dhammaan guddiga, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo dhammaan codsadayaasha sannadkan Abaalmarinta Aqoon-yahanka McKnight ee ku-biirintoodii iyo hal-abuurkoodii. ”
Mid kasta oo ka mid ah toddobada soo socota ee qaata Abaalmarinta Aqoonyahannada McKnight wuxuu heli doonaa $75,000 sanadkiiba muddo saddex sano ah. Waxay kala yihiin:
Khamriga Xeebta Cold
Harbor Guga qabow, NY Daah-furka Astaamaha Molecular ee Waxqabadka Microglial ee Maskaxda La Kiciyey - Baadhitaan ku saabsan sida microglia u qaabeeyo shaqada synaptic ee ka jawaab celinta dareenka muuqaalka.
Ann Arbor, MI Naqshadeynta Dumarka ee Midho La'aanta: Labnimada oo lagu xakameynayo barnaamijyada neerfaha haweenka - Baadhitaanka sida midhaha labka ah ee maskaxda duullimaadyadu u soo baxaan wareegyada u gaarka ah galmada, iyo inay ku samaysan yihiin xakamaynta qaybo ka mid ah "saldhig" dumar ah.
Imtixaan, CA Sidee Maskaxda u xisaabtanta iyadoo la adeegsanayo Firfircoonida Dadweynaha iyo Meelaha Maskaxda? - Sahaminta sida xisaabinta dareemayaasha iyo mootadu isku mar u wada dhacaan guud ahaan gobollada maskaxda, iyo sida hababka cusub ay gacan uga geysan karaan baaritaanka arrintan iyo dhacdooyinka kale ee maskaxda ku baahsan.
Boston, MA Sawirka Nuuralka iyo Dareenka dareeraha ee Maskaxda Hurdada - Daraasad ku saabsan saameynta hurdo ee xisaabinta neerfaha iyo fiisiolojiyada, iyadoo xoogga la saarayo doorka dareeraha maskaxda iyo sida ay ula jaanqaadayso hirarka gaabiska neerfaha.
New York, NY Moodooyinka Ku-Xidhan Ku-Xaddidan ee Dabeecadda La-Qabsiga - Aqoonsiga astaamaha isku xirnaanta jaantusyada fiilooyinka neerfaha iyo u adeegsiga si loo sahamiyo sida xogta dareenku u gaareyso neerfayaasha haga dabeecadda.
New York, NY Isuduwaha Isbedelada ee Mouse Cortex - Baadhitaan ku saabsan sida maskaxdu wax u barato si ay u saadaaliso dhawaaqa dhaqdhaqaaqa, iyo saamaynta rajadaasi ku yeelato dabeecadda.
Ann Arbor, MI Farsamooyinka Gacanta ee Xakameeya Qawaaniinta Wareegga - Daraasad ku jirta vivo si loo soo bandhigo sida saacadahayaga wareegga ah loo xakameeyo heerka hoose.
Waxaa jiray 70 codsadeyaal ah sannadkan Abaalmarinta Aqoonyahanka McKnight, oo matalaya macallimiinta ugu wanaagsan ee neerfaha ee dalka. Kulliyaddu waxay xaq u leedahay oo keliya abaalmarinta inta lagu jiro afartooda sano ee ugu horreysa ee booska fasalka oo buuxa. Martin ka sokow, guddiga xulashada Abaalmarinta Aqoonyahannada waxaa ka mid ahaa Gordon Fishell, PhD, Jaamacadda Harvard; Loren Frank, PhD, Jaamacadda California, San Francisco; Mark Goldman, PhD, Jaamacadda California, Davis; Richard Mooney, PhD, Dugsiga Caafimaadka ee Jaamacadda Duke; Jennifer Raymond, PhD, Jaamacadda Stanford; Vanessa Ruta, PhD, Jaamacadda Rockefeller; iyo Michael Shadlen, MD, PhD, Jaamacadda Columbia.
Codsiyada abaalmarinta sanadka soo socda waxaa la heli doonaa Ogosto waxayna ku egtahay Janaayo 10, 2022. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan barnaamijyada abaalmarinta neerfaha ee McKnight, fadlan booqo websaydhka Sanduuqa Dhaqaalaha https://www.mcknight.org/programs/the-mcknight-endowment-fund-for-neuroscience
Lucas Cheadle, Kaaliyaha Professor-ka ee PhD, Sheybaarka Hargabka Gu'ga, Cold Harbor Harbor, NY
Inta badan cilmiga neerfaha ee koritaanka ayaa taariikh ahaan diirada saarey dhinacyada adag ee fiilooyinka leh ee horumarinta neerfaha - sida unugyada hiddo ahaan loogu “barnaamijyeeyo” si loo horumariyo hab gaar ah ama loo bixiyo hawl gaar ah. Ilaa iyo dhowaan, cilmi baaristu waxay si aad ah u baari jirtay neerfaha naftooda, iyada oo in badan oo ka mid ah aaladaha iyo farsamooyinka sida caadiga ah loo isticmaalo lagu fiicnaado in lagu barto qaababka u gaarka ah neerfaha. Daraasaddiisa, Dr. Cheadle wuxuu u weecinayaa meelaha cilmiga yar ee laga barto cilmiga neerfaha: marxalad dambe oo ah horumarka neerfaha oo ay saameyn ku yeelato arrimo deegaanka ka baxsan, iyo doorka ay ciyaaraan unugyada difaaca maskaxda ee loo yaqaan microglia howshan.
Daraasaddiisa, Dr. Cheadle wuxuu si gaar ah u darsaa horumarinta isku xirnaanta neerfaha ee muuqaalka ah iyadoo la adeegsanayo qaab jiir ah oo jiirka qaarkood lagu koriyo jawi aan iftiin lahayn inta lagu jiro marxaladda muhiimka ah ee horumarka. Daraasadiisii hore waxay muujineysaa in microglia asal ahaan ay "xoqdo" nidaamka muuqaalka, oo baabi'ineysa isku xirnaanta synaptic ee aan waxtar badan lahayn. Natiijo ahaan, amar bixinta jirka ee qeybtaas neerfaha waxay ku kala duwan tahay jiirka lagu koriyo mugdiga marka loo eego kuwa iftiinka ku koray. Shaqadiisa socota, Dr. Cheadle wuxuu raadin doonaa inuu cadeeyo heerka molikula sida microglia ay u kiciso arrimo dibadeed (sida nalka) iyo farsamooyinka ay markaa ku sawiraan isugeynta.
Cilmi-baaristu waxay bixisaa dhowr habab oo cusub, oo ay ku jiraan adeegsiga tikniyoolajiyadda hiddo-u-habeynta si loo baabi'iyo hiddo-wadeyaal gaar ah oo loo yaqaan 'microglial genes' si loo qeexo kaalintooda horumarinta wareegga muuqaalka, iyo sidoo kale abuurista khad jiir ah oo jiir ah oo calaamadeeya unugyada firfircoon ee firfircoon ee maskaxda, labadaba xeeladaha badanaa lagu dabaqo neur-mareenada uu Dr. Cheadle la qabsanayo barashada microglia markii ugu horeysay. Dr. Cheadle wuxuu rajeynayaa in cilmi baaristiisa ay gacan ka geysan karto daah-furnaanta fikradaha cusub ee ku saabsan doorka unugyada aan neerfayaasha ahayn ee maskaxda, taas oo u horseedi karta horumarro mustaqbalka ah oo ku saabsan asalka iyo daaweynta xanuunnada neerfaha, gaar ahaan kuwa sida autism-ka iyo shisoofrani ee soo ifbaxa xilli dambe. horumarka iyo waxay leeyihiin xoogaa tilmaam ah qayb ka mid ah difaaca jirka.
Farqiga udhaxeeya maskaxda labka iyo dhedigga ayaa umuuqda mid xariif ah oo saameynaya kaliya 2-5% ee maskaxda - kadib dhamaantiis, shaqooyinka badankood ee noolaha nool ee labada jinsiba waa isku mid, oo ay kamid tahay baahida cunida, hurdada, barashada, iyo guuritaanka - laakiin kuwa kala duwanaanshaha ayaa muhiim u ah badbaadada noocyada. Baadhitaan badan ayaa dhaqan ahaan ahaa, sida waxqabadka caadooyinka isu galmoodka, laakiin waxyar ayaa laga fahmay sida hiddo-wadayaasha caadooyinkaas maskaxda loogu jiheeyo.
Dr. Clowney wuxuu qiyaasayaa in howshu tahay mid kala goyn ah - in koodhka maskaxda labada jinsi uu si isku mid ah u bilaabmayo, ka dibna hiddo-wadayaasha qaarkood loo demiyo noocyo gaar ah oo jinsi kasta ah, taasoo keenta maskaxda ragga iyo dumarka. Intaas waxaa sii dheer, waxbarashadeeda ilaa maanta iyadoo adeegsaneysa qaabka duulista miraha waxay soo jeedineysaa in maskaxda labku ay ka dhalan karto ka saarida barnaamijyada neerfaha “qaabka aasaasiga ah” ee aad ugu dhow maskaxda dumarka, halkii laga abuuri lahaa barnaamijyo cusub. Fure u ah geeddi-socodka waa cunsur transcript cunsur loo yaqaan "Fruitless," borotiin lagu abuuray kaliya maskaxda duqsiga miro labka ah oo nidaamiya in hiddo-wadayaasha jinsiga u gaarka ah ee maskaxda ay badalaan ama damiyaan, oo door ku leh wadista dareenka galmada ku saleysan xitaa dadka waaweyn.
Daraasaddeeda, Dr. Clowney waxay raadin doontaa inay aqoonsato bartilmaameedyada hidde-wadaha ee Fruitless ee horumarinta iyo maskaxda dadka waaweyn; sida wareegyada neerfaha ee xaddidan ay u habeeyaan haasaawaha labka iyagoo ka horjoogsanaya ragga inay u gutaan cibaadaysiga ragga kale; iyo sida labku u waayayo wareegyada neerfaha ee beedka dhigista. Tijaabooyinka ku lug leh waxay adeegsadaan farsamooyin kala duwan si ay ugu kuur galaan faa'iidada ama luminta wareegyada la xiriira galmada iyo dabeecadaha ku jira xayawaanka leh ama aan lahayn Midhaha. Tan iyada ah, waxay ku iftiimin kartaa habka horumarinta maskaxda, taas oo u horseedi karta aragti cusub oo ku saabsan sida maskaxdeenu u ogaato dabeecadaha dabiiciga ah ee la qabanayo iyo kuwa aan la qaban, waxaana suurtogal ah inay caawiso cilmi-baarayaasha cudurada neerfaha iyo maskaxda, qaar badan oo ka mid ah waxa ugu badan waa hal jinsi ama mid kale.
Mid ka mid ah tijaabooyinka, jiirka ayaa loo tababaray inay ku leefleefayaan mid ka mid ah laba jiho in yar ka dib marka kicinta la soo bandhigo ka dibna laga saaro. Maaddaama kiciyaha uusan hadda joogin, maskaxdu waxay u baahan tahay inay keydiso xusuustiisa, qorsheyso dhaqdhaqaaq, joojiso ficilka waqti cayiman, ka dibna tallaabo qaado. Inta lagu jiro ilbidhiqsiyadaas, waxqabadka maskaxda waxaa lagu duubay meelo badan oo maskaxda ah isla mar. Xogta hordhaca ah waxay muujineysaa in waxqabadka uu jiro oo uu isbadal kuhalayo gobolada iyo dadyowga neerfaha kaladuwan, Druckmann wuxuu ujeedkiisu yahay inuu muujiyo in waxqabadkan wadajirka ah uu dhexgalayo guud ahaan aagagga maskaxda iyo qaababka isdhexgalka ay "u hagaajin karaan" xusuusta lagama maarmaanka ah iyo ujeedka dhaqdhaqaaqa, xitaa marka hal gobol ama waxqabadka dadweynaha ayaa khalad noqon kara. Khad labaad oo cilmi baaris ah oo la adeegsanayo bini'aadamka ayaa lagu hayaa waxqabadka maskaxda gobalada inta lagu jiro hadalka - hawl aan caadi aheyn oo isku dhafan - tijaabooyin lagu helayo isla su'aasha ah sida xisaabinta looga sameeyo maskaxda.
Dr. Druckmann wuxuu u arkaa tijaabooyinkan inay yihiin talaabooyinka ugu horeeya ee loo qaadayo qaab loo helo sida maskaxdu u shaqeyso guud ahaan. Isla mar ahaantaana, wuxuu kaloo rajeynayaa inuu ballaariyo habka ay cilmi-baarayaashu u shaqeeyaan; Mashruuciisu wuxuu ku lug leeyahay wadashaqeyn xoog leh dhowr cilmi baarayaal kale, wuxuuna rajeynayaa inuu awood u yeesho inuu sahamin karo sayniska aasaasiga ah iyo sidoo kale inuu raadsado codsiyada bukaan-socodka ee natiijooyinkiisa, gaar ahaan ka-qaybgalkiisa mashruuc tijaabo caafimaad oo iskaashi oo ka shaqeynaya is-dhexgalka neerfaha. Awood u lahaanshaha qeexida sida waxqabadka maskaxda loogu tarjumayo waxqabad adag sida hadalka wuxuu u horseedi karaa tikniyoolajiyad soo celin karta waxqabadka qaar ee dadka qaba cudurada xumaada sida ALS.
Laura Lewis, PhD, Kaaliyaha Professor, Jaamacadda Boston, Waaxda injineernimada Biomedical, Boston, MA
Hurdadu waa mid muhiimad weyn u leh caafimaadka maskaxda muddada dhow iyo tan fog labadaba. Dhaqdhaqaaqa neerfaha iyo dareeraha dareeraha dareeraha cerebrospinal fluid (CSF) labaduba waxay isbadalaan inta lagu guda jiro hurdada, cawaaqibyo kaladuwanna leh - nidaamyada dareenka ayaa ka weeciya ka warqabida kicinta dibada iyo dib u howlgelinta xusuusta, CSF-na waxay ku qulqulaysaa maskaxda waxayna tirtiraysaa borotiinada sunta ah ee soo kordha inta lagu jiro saacadaha soo jeedka Si xiiso leh, labada geeddi-socod ayaa si aad ah isugu xidhan. Daraasaddeeda, Dr. Lewis waxay baari doontaa xiriirka ka dhexeeya neerfaha iyo dareeraha dareeraha inta lagu jiro hurdada iyo isku xirka midkasta caafimaadka maskaxda.
Furaha cilmi baarista Dr. Lewis ayaa ah awooda barashada bukaanada inta lagu gudajiro hurdada indhaha ee aan dhaqsaha lahayn (NREM) oo lasocota dhaqdhaqaaqa maskaxda iyo dhaqdhaqaaqa dareeraha labadaba waqtiyada gaagaaban. Si taas loo sameeyo, Dr. Lewis wuxuu adeegsanayaa isku-darka cusub ee EEG oo leh sawir-maskaxeed maskaxeed oo si dhakhso ah u shaqeynaya (fMRI), oo lagu hagaajiyay iyadoo la adeegsanayo algorithm ay sameysay si looga takhaluso buuqa, iyada oo u oggolaanaysa iyada inay ilaaliso isku-darka, dhaqdhaqaaqa neerfaha saxda ah iyo socodka CSF. Cilmi-baaristeeda ayaa marka hore baari doonta sida mowjadahaan gaabiska ah looga dhex shaqeysiiyo maskaxda iyo shabakadaha neerfaha ee ku lugta leh, iyadoo la adeegsanayo kicinta maqalka ee sare u qaadi karta mowjadaha gaabiska ah. Marka labaad, waxay baari doontaa xiriirka ka dhexeeya hirarkan gaabiska ah iyo socodka CSF; mala-awaal ayaa ah in dhaqdhaqaaqa neerfaha oo gaabis ah uu yareeyo baahida dhiigga, asal ahaan CSF u soo jiido maskaxda maaddaama dhiiggu hoos u dhacayo. Iyadoo la adeegsanayo farsamada sawirka la isku daray, Dr. Lewis wuxuu awoodi doonaa inuu fiiriyo socodka dhiigga ee isku dhafan iyo socodka CSF daqiiqad yar oo ah 3D maskaxda oo dhan.
Saamaynta isdhaxgalkaani waa mid qoto dheer. Inta lagu jiro mowjadahaan gaabiska ah, shabakada neerfaha ee maskaxda ayaa dib loo habeeyay iyadoo qaab muhiim u ah dib u howlgelinta xusuusta iyo caafimaadka maskaxda ee muddada gaaban; socodka CSF ee kuxiran mowjadaha gaabiska ah ayaa muhiim u ah caafimaadka maskaxda muddada dheer. Fahamka sida nidaamyadan u shaqeeyaan ayaa ka caawin doona cilmi-baarayaasha hurdada mustaqbalka inay fahmaan marka wax qaldamaan, xiisaha gaarka ah ee daraasadaha cilladaha neerfaha iyo cilmu-nafsiga, oo ay ku jiraan Alzheimers, oo laga yaabo inuu ku xirnaado carqaladda hurdada gaabisa.
Iyada oo la adeegsanayo jaantusyada fiilooyinka elektarooniga ah ee cusub (EM) ee nidaamyada neerfaha ee marwalba sii murugsan, cilmi baarayaashu waxay qarka u saaran yihiin inay furfuraan faham qoto dheer oo ku saabsan sida nidaamyadani u horseedaan dhaqanka. Caqabadda: Sida loo adeegsado xog-ururintaan ballaaran, oo loo yaqaanno isku-xirnaanta, taas oo marka ay dhacdo duqsiga miraha ay ka mid yihiin tobanaan kun oo neur-mareeno ah iyo tobanaan milyan oo synapses ah. Fulinta hawshani way adagtahay maadaama habab badan oo guul leh oo ku saabsan qaabeynta qaabdhaqanka, oo ay ku jiraan farsamooyinka ay ku dhiirrigeliso barashada mashiinka, adeegsadaan tusaalayaal aan ka tarjumeynin xaqiiqda sida maskaxda iyo nidaamyada neerfaha loo xidho.
Daraasaddiisa, Dr. Litwin-Kumar wuxuu ujeedkiisu yahay inuu horumariyo hannaan loo keeno adduunyada qaababka isku xirnaanta iyo qaabdhismeedka habdhaqanka si wadajir ah iyadoo la horumarinayo habab lagu aqoonsado qaabdhismeedyada ku habboon ee isku xirnaanta kaas oo xakameyn kara moodooyinka habdhaqanka - tusaale ahaan, iyadoo la xaddidayo moodellada sidaa darteed waxay isticmaalaan oo keliya isku xirnaanta 'synaptic' ee jir ahaan ku jira isku xirnaanta, halkii ay ka sameyn lahaayeen boodbood ahaanba jir ahaan aan macquul ahayn oo u dhexeeya neerfaha.
Si loo tijaabiyo loona turxaan bixiyo habkaan, Dr. Litwin-Kumar wuxuu marka hore diirada saarayaa isku xirnaanshaha qeyb ka mid ah maskaxda duqsiga miro loo yaqaan jirka boqoshaada, oo ah gobol si fiican loo khariidadeeyay oo xarun u ah barashada is weheshada. Waxyaabaha dareemayaasha ah ee laga helo unugyada Kenyon waxaa lagu saadaaliyay inay soo saaraan neerfaha, taas oo kicinaysa dabeecadaha sida ku soo dhowaanshaha ama ka hortagga falcelinta. Iyagoo adeegsanaya tusaalayaal horumarsan, kooxdu waxay raadin doonaan inay si hufan u aqoonsadaan qaab dhismeedka isku xirnaanta oo ka tarjumaya sida macluumaadka loogu gudbiyo jirka likaha. Kadib waxay tijaabin doonaan moodooyinka waxbarasho ee qotada dheer oo ay xannibayaan isku xirnaantaas si ay u arkaan sida wax ku oolka ah ee ay u saadaalinayaan jawaabaha kicinta, marka la barbar dhigo moodooyinka aan xaddidnayn. Tijaabooyin dheeri ah ayaa sahamin doona doorka dopamine neurons ee barashada aadka u adag. Wadajir ahaan, cilmi-baaristani waxay aasaas u dhigi doontaa adeegsiga isku-xirnaanta kakanaanta sii kordheysa oo ay weheliso moodellada barashada si ay si hufan uga tarjumaan hab-dhaqanka nafleyda dhabta ah.
Mid ka mid ah awoodaha cajiibka ah ee laga helay maskaxda noolaha horumarsan ayaa ah awooda lagu saadaalin karo mustaqbalka, maahan oo keliya miisaanka waqtiga dheer, laakiin daqiiqad daqiiqad ah, si joogto ah loo xisaabiyo loona diiwaan geliyo xogta wax soo saarka iyo abuuritaanka moodello saadaalin ah oo ku saleysan khibraddii hore. Moodooyinkan saadaashu waxay naga caawinayaan inaan si wax ku ool ah ula socodsiino oo aan ula macaamilno adduunka - iyo sida ugu muhimsan, u aqoonsanno soo-kabashada wixii laga filayay oo calaamad u noqon kara khatar ama fursad. Shaqada Dr. Schneider waxay diirada saareysaa sida xakameynta mootada iyo gobolada dareenka ee maskaxda ay u wada shaqeeyaan qaabkan waxayna ka shaqeyn doonaan sidii loo soo bandhigi lahaa sida maskaxdu wax u baraneyso una sameysato xusuus aas aas u ah waxa laga filayo.
Tijaabooyinkiisa, Dr. Schneider wuxuu diiradda saarayaa dariiq umuuqda mid is hortaaga oo laga helo maskaxda jiirka (iyo maskaxda bini'aadamka): marin biyood isku xira gobolka xakamaynta mootada iyo maqalka maqalka. Markasta oo dhaqdhaqaaq la sameeyo, labada gobol waxay ku wada xiriiraan qaab u sheegaya nidaamka maqalka in la iska indho tiro dhawaaqa dhaqdhaqaaqaas abuuray, ku dhowaad sida sawir diidmo ah oo kansalinaya dhawaaqa. Tijaabooyinkiisa, jiirku waxaa shuruud looga dhigayaa inuu filayo dhawaq cayiman markay riixayaan kabaal. Dhaqdhaqaaqa neerfaha iyo jawaabaha habdhaqanka ayaa la duubi doonaa marka dhawaqa la filayo uu soo maro, ka dibna markale marka dhawaqa si xeeladeysan loo badalo.
Tijaabooyinkan ayaa gacan ka geysan doona in la garto doorka neerfayaasha gaarka ah ee saadaalinta jawaabaha dareenka, sida kontoroolka mootada iyo xarumaha dareenka ee maskaxdu ay ula falgalaan, iyo sida waddooyinka u dhexeeya mootooyinka iyo gobollada dareenka ay isu beddelaan markii dhawaq cusub uu noqdo “mid la filayo”. Cilmi-baaris dheeri ah ayaa xannibi doonta waddooyinka qaarkood ee maskaxda si loo go'aamiyo doorkooda samaynta saadaalinta, iyo sidoo kale eeg sida maskaxdu u isticmaasho fikradaha muuqaalka ah si ay uga caawiso saadaalinta dhawaaqyada is-soo-saarka ah. Fahmitaanka sida nidaamyadan saadaalinta iyo waxbarashadu u shaqeeyaan ayaa laga yaabaa inay gacan ka geysato hagitaanka cilmi-baarista mustaqbalka ee noocyo kala duwan oo neerfaha ah.
Swathi Yadlapalli, PhD, Kaaliyaha Professor, Jaamacadda Caafimaadka ee Jaamacadda Michigan, Waaxda Unugyada iyo Bayoolojiga Horumarinta, Ann Arbor, MI
Saacadaha wareegga - 24-ka saacadood ee gudaha ah ee kaxeeya qaar badan oo ka mid ah laxanka nidaamkeenna nafleyda, sida marka aan seexanno, soo toosno, sida aan dheef-shiid kiimikaadka u sameyno, iyo inbadan oo badan - waxaa laga helaa dhammaan unugyada jidhkeenna. Laakiin sida saxda ah waxa ka dhacaya gudaha unug kasta oo la siinayo si loo abuuro qaafiyaddaas si xun baa loo fahmay. Cilmi-baaristii hore ee kiimikada iyo hidde-wadaha ayaa qeexday borotiinno muhiim ah oo ah arrimo isdaba-marin ah, ha ahaato mid wanaagsan ama ka-hortag ah, oo door ku leh wareegga wareegga, laakiin kama aysan hadlin sida saxda ah ee ay ugu shaqeeyaan unugga nool ee heerka hoose, heerka bayoolojiga ee leh taxan qaybaha laakiin aan fahmin sida ay iskula jaan qaadaan.
Dr. Yadlapalli wuxuu soo saaray habab casri ah oo lagu sameeyo hal unug, muujinta xallinta sare ee borotiinadan iyo sida ay ula falgalaan muddo 24 saacadood ah unugyada nool ee duqsiga miraha markii ugu horreysay, natiijooyinka hordhaca ahna waxay horey u muujiyeen lama filaan. aragtiyo. Gaar ahaan, mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee soo gudbinta xaddidan, oo loo yaqaan 'PER', ayaa isu soo uruuriya si loo sameeyo fociyo si siman loogu qaybiyo baqshadda unugyada unugyada, isla markaana door ka ciyaaraya wax ka beddelka goobta nukliyeerka ee hiddo-wadaha saacadaha inta lagu jiro wareegga. Markii hore, waxaa loo qaatay in borotiinadani ay ahaayeen kuwo si bilaash ah u sabeynaya ama aan loo kala qaybin. Daraasadahaani waxay muujinayaan lakab cusub oo muhiim ah oo nidaaminta nidaamka saacadaha wareega.
Tijaabooyin isdaba-joog ah, Dr. Yadlapalli wuxuu go'aamin doonaa farsamooyinka ku lug leh geeddi-socodkan - sida fociyuhu u samaysan yahay iyo halka ay ka soo jeedaan, iyo sida ay kor ugu qaadaan cabudhinta hiddo-wadayaasha saacadda nidaamsan. Fahmida wax badan oo ku saabsan ka shaqeynta nidaamyadan aasaasiga ah, ee awooda unugyada, kuwaas oo saameyn ku leh ilaa iyo dabeecadda iyo caafimaadka dhammaan noolaha, waxay siin doontaa bar bilow ah cilmi baaris ku saabsan hurdo badan iyo jirrooyinka dheef-shiid kiimikaadka iyo cudurada neerfaha.